လက်ရှိဘဝလောက် ကျေနပ်စရာမကောင်းခဲ့လို့ အခုလက်ရှိဘဝကို ပိုကြိုက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ - Yangon Media Group
ဒီတစ်ပတ် 8days ရဲ့ Cover Star အဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ သူက တော့ အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက် အောင် သွက်လက်လှပနေတဲ့ မော် ဒယ်လ်သန္တာလှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ် စုံကိုလည်း မြန်မာမှုကိုအခြေခံပြီး ခေတ်ပေါ်ဒီဇိုင်းနဲ့ ဝတ်ဆင်လို့ရ မယ့် ပုံစံမျိုးလေး ဆင်ယင်ပေးထား တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo-Ko Linn( Studio K), Make Up- May Oo , Dress- Fashion Director Z Htoi San(Justice Art Drawing)
Q. မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ရတာကြိုက်လား…။
A. မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ရတာ ကြိုက်တယ်။ မြန်မာဝတ် စုံက ဟိုးရှေးခေတ်တုန်းကလည်း သူ့ခေတ်နဲ့သူ ထွင်ထွင်ပြီးတော့ ဝတ်ကြတာပါပဲ။ အဲဒီတော့ တစ် ခေတ်နဲ့ တစ်ခေတ်ကလည်း တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာမှုကို တကယ်အသုံးချပြီးတော့ ထွင်ထား တဲ့ တခြားဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှ မတူတဲ့ ဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင် အစ်မအရမ်းကို လေးစားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို တော့ ဒီမြန်မာမှုပြုပြီးတော့ မြန်မာ ဒီဇိုင်နာတွေက တခြားဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဒီဇိုင်းကိုမှ ယူထားတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ဟာကိုယ် ထွင်ထားတာဖြစ်တဲ့ အတွက် တခြားနိုင်ငံတွေက လိုက် တုဖို့ပဲရှိတယ်။ ကိုယ်က သူများကို လိုက်တုထားတာ မဟုတ်ဘူးဆို တော့ အဲဒီလိုအဝတ်အစားမျိုးဆို ရင် အစ်မ အရမ်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
Q. အသက်၂ဝအရွယ်ထက် အခုရောက်နေတဲ့ အသက်၎ဝ Life ကို ပိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ Status တင်ဖြစ်တာကရော…
A. အဲဒါကတော့ အစ်မထင် ပါတယ်။ အစ်မ ၂ဝနဲ့ ၄ဝ ကြားထဲ မှာ အစ်မဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝက အခုလက်ရှိဘဝလောက် ကျေနပ် စရာမကောင်းခဲ့လို့ မပျော်ခဲ့လို့လည်း အခုလက်ရှိဘဝကို ပိုကြိုက်နေတာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Q. Social Media အနေနဲ့ ဘာတွေသုံးဖြစ်လဲ…။
A. Social Media အနေနဲ့ ဆိုရင်အစ်မက အစ်မရဲ့ Page ကိုပဲ သုံးဖြစ်ပါတယ်။ Page ကိုပဲ Active ဖြစ်အောင် အမြဲတမ်းထားတယ်။ အများအားဖြင့် Social Media သုံးတဲ့လူတွေက ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကို Account ပဲ သိကြတယ်။ Page ကို သုံးလို့ရတာ ရှိတယ်။ Like လုပ် ထားပြီးတော့ Follow လုပ်လို့ရ တယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ အဲဒီတော့ အစ်မ ကို Page ထဲမှာ Add ပေးပါ၊ Add ပေးပါပြောနေကြတာ ကြား ကြားနေရတယ်။ အမှန်က Page က add လုပ်လို့မရဘူး။ တကယ့် တကယ်က Like လုပ်ပြီး Follow လုပ်ထားတယ်။ See First လုပ် ထားတယ်ဆိုရင် add လုပ်တာနဲ့ အတူတူပါပဲဆိုတာကို လူတိုင်းကို လိုက်ရှင်းပြနေရတယ်။ နောက်ပြီး အစ်မ Instagram လည်းသုံးဖြစ် ပါတယ်။
Q. အွန်လိုင်းသုံးဖို့ အချိန်ရော သတ်မှတ်ထားလား..။
A. သတ်မှတ်ထားပေးမယ့် လည်း တစ်ခါတလေကျရင် တစ်နေ ကုန်လို့ တစ်ခါလောက်ပဲ ဖွင့်ဖြစ် တာလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Q. ပရိသတ်နဲ့ အဆက်မသွယ် မပြတ်အောင် Program လေး တစ်ခုလုပ်နေတယ်ကြားတယ်၊ အဲဒါ ကရော..။
A. အဲဒါက ဒီဇင်ဘာ၊ ဇန်န ဝါရီလလောက်ဆိုရင် အမျိုးသမီး တွေအတွက်ပဲ သီးသန့်ပေါ့နော်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစား ချက်တွေ ဖွင့်ဟပေးမယ့် Talk Show တစ်ခုကို အစ်မလက်ခံထား တယ်။ အဲဒါတော့ နောက်နှစ်တစ် နှစ်လုံး တောက်လျှောက် စနေနေ့ တိုင်း လာနေမှာပါ။ ဘယ် Channel လဲဆိုတာတော့ ပြောလို့မရသေးဘူး ဖြစ်တဲ့အတွက် ထွက်လာပြီဆိုရင် တော့ သိရမှာပါ။
Q. အဲဒါဆို အစ်မပရိသတ်နဲ့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အဆက်မသွယ် မပြတ်တော့ဘူးပေါ့…။
A. ဟုတ်တယ်။ အဲဒီလိုလည်း အစ်မ ပရိသတ်နဲ့ အမြဲတမ်း အဆက်အသွယ် တစ်ခုခုလုပ်လို့ ရမယ့် ပရောဂျက်တစ်ခုကို ရှာနေ တာဆိုတော့ အခုအမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်နဲ့ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကိုယ့် Page ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ အစ်မပြောချင်နေတဲ့ အရာတွေ၊ ဆွေးနွေးချင်တဲ့ အရာ တွေ၊ မျှဝေချင်တဲ့အရာတွေ အကုန် လုံးက တီဗွီပေါ်ကနေသွားလို့ရပြီ ပေါ့နော်။
Q. ပရိတ်သတ်ကိုရော ဒီပရို ဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာများ ကြို ပြောထားချင်လဲ..။
ဗ. အစ်မအခုထွက်မယ့် ဒီ Women Talk Show ကိုစောင့် ကြည့်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဖွင့်ချင်တာတွေ ရှိရင် အမျိုးသမီးတွေ အားလုံး အစ်မရဲ့ Page ပေါ်ကနေ တစ်ဆင့် Message Box ထဲဝင်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ရင်တွင်း ပြဿနာလေးတွေ၊ အကြံဉာဏ် လေးတွေ မျှဝေပေးလို့ ရပါတယ်။အစ်မအမြဲ အဆင်သင့်ရှိနေပါမယ် လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်တွင် ရထားချင်းတိုက်၊ ၂၁ ဦးသေ၊ ၁ဝဝ ဒဏ်ရာရရှိ